'Resident Evil: Kugamuchirwa kuRaccoon Guta' kuri Kuverengerwa-R - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Resident Evil: Kugamuchirwa kuRaccoon Guta' kuri Kuverengerwa-R
'Resident Evil: Kugamuchirwa kuRaccoon Guta' kuri Kuverengerwa-R
Gory Zombie Nguva!
by Trey Hilburn III September 12, 2021 441 maonero
Zvakanaka, zvakanaka, mashoko akanaka anoramba achibuda mune nyowani mugari Zvakaipa musasa wemufirimu. Pamusoro peese anoshamisa uye echokwadi mafoto akatumirwa kubva kune yakasvibira miriwo kune zvombo nenzvimbo, izvi mugari Zvakaipa ane mitambo mupfungwa huru nguva. Zvino panouya chiziviso icho Kugamuchirwa kuRaccoon Guta iri kuverengerwa R yemutauro, gore uye mhirizhonga yakasimba mukati mese. Uku ndiko kuenda chaiko kubva kuPaul WS Anderson uye Milla Jovovich mafirimu aive akasununguka zvakanyanya pamitambo.
Mutsara we Mugari Zvakaipa: Kugamuchirwa kuRaccoon Guta inoenda seizvi:
Kamwe imba iri kuwedzera yemishonga hofori Umbrella Corporation, Raccoon Guta ikozvino rave kufa Midwestern taundi. Kubuda kwekambani kwakasiya guta rave dongo… riine huipi hwakanyanya hwaira pasi pechiso. Kana uipi uhu hwabuditswa, vanhu veguta vanogara nekusingaperi… vachichinjwa… uye boka diki revapukunyuki rinofanira kushanda pamwechete kuti vawane chokwadi chiri kushure kweMburera uye voita husiku hwese.
Iyi firimu ine yakakura runyorwa inosanganisira Kaya Scodelario saClaire Redfield, Robbie Amell saChris Redfield, Avan Jogia saLeon S. Kennedy, Hannah John-Kamen saJill Valentine, Tom Hopper saAlbert Wesker, Donal Logue saMukuru Brian Irons, Lily Gao saAda Wong, Nathan Dale saBrad Vickers, naMarina Mazepa saLisa Trevor.
Mugari Zvakaipa: Kugamuchirwa kuRaccoon Guta inosvika Mbudzi 24.
Uri kufara here nezvaJohannes Roberts akatungamirirwa mugari Zvakaipa? Tiudzei muchikamu chemashoko.